Caqabadaha ku Gedaaman dhallinyarta damacu kaga jiro golayaasha deegaanka | Somaliland Post
Home Maqaallo Caqabadaha ku Gedaaman dhallinyarta damacu kaga jiro golayaasha deegaanka
Caqabadaha ku Gedaaman dhallinyarta damacu kaga jiro golayaasha deegaanka
Geeddi socodka siyaasadeed ee Somaliland waxa uu soo maray marxalado kala duwan oo mid walba ay ku xeeranyihiin duruufo gaari. Tusaale ahaan markii dalka lagu soo noqday waxa aynu isla qaadannay in ay siyaasaddeenna sal u noqoto hab qabiileed lagu soo xulo madaxda kala duwan ee qaranka. Wajagii labaad waxa aynu u gudubnay in ay dadku sanduuqa codka masiirkooda ku jaangooyaan, taas oo ay ugu horraysay aftidii dastuurka, dastuurkaas oo aynu ku ogolaanay in aynu qaadanno habka xisbiyada badan iyo doorashooyinka tooska ah ee madaxda qaranka. Waxa aynu galnay doorashooyin kala dambeeyey oo caqabadahooda watay. Sida duruufo dhaqaale, bisayl la’aan dhinaca siyaasadda ah iyo kuwo dhinaca dhaqanka ah intaba. Haddii aan tusaale kasoo qaadanno caqabadaha siyaasiga ah ee jiray, dhallinyarta reer Somaliland fursad sharci umay haysan inay ka qayb galaan doorashooyinkaas kala dambeeyey ee dalka ka dhacay. Marka aynu wakhtigan xaadirka ah eegno waa Ilaahay mahaddii oo caqabaddihii sharci ee dhallinyarada hor taagnaa qaar ka mid ah ayaa meesha laga saaray oo manta waxa ay fursad sharci u haystaan inay ka qayb galaan doorashooyinka golayaasha deegaanka, arrintaasna waxa ammaanteeda leh xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Silaanyo, Golayaasha sharci dejinta iyo weliba dhallinyarta oo laftoodu dedaal badan ka galay arrintaas. Haddaba su’aashu waxa ay tahay, mar haddii caqabaddii sharci meesha laga saaray miyey dhamaadeen caqabadihii hor yaallay dhallinyartu? Waa su’aasha uu ka jawaabayo maqaalkani.